5 Zvikonzero Zvokusashanyira Makorokari Munguva Yemazamu Kupera
Nzira Yokuparadza Nayo Mazororo Okuzorora uye Mamwe mazano anobatsira
Uchenjeri hunowanikwa pamagungano hunofanirwa kuti kushanya nekushanyira makoroji munguva yezororo mazororo ndeyekuchenjera, bhajeti-inoziva nzira yekuuraya shiri mbiri nedombo rimwe rekudzidzira. Uchenjeri huri pamutemo hwakashata. Heano zvikonzero zvishanu nei:
Makoroji anonyararira muzhizha. Chikoro chekorosi chinowanzosara panguva yekuzorora kwezhizha uye mazororo makuru, saka haungatongonzwa zvakanaka kune izvo chikoro uye, zvinonyanya kukosha, vanhu vari chaizvo. Mubvunzo mukuru, unonyanya kukosha uyo mudzidzi anofanira kuzvizvibvunza pamba yekoroji ndeyekuti, "Ndiri kukwanisa here?" Hapana kana mumwe wenyu achakwanisa kupindura izvi nokuti iyo yakasununguka, yakanyatsodzika musasa ichazonzwa yakasiyana chaizvo kana kune vanhu 30 000 vakawanda vanofamba-famba vachipoteredza.
Kushanyirwa kunowanikwa uye hurumende haisipo. Iwe haugone kuwana kaviri-kutarisa kwezuva nezuva uye nyore nyore masimba-a-tetes mukati memwedzi yezhizha. Zvizhinji zvechikwata chiri pazororo, uye kutarisa kazhinji kunodonha kumashure mashomanana pavhiki. Iwe unogona kunge uchigara mune imwe yechikoro chechikoro, asi hazvizove zvakafanana. Chikoro chezhizha chikamu chiduku uye chakasiyana chechikoro chechikoro.
Vadzidzi vakaoma kuwana. Kunyange iyo inonyanya kukosha yekufambisa musangano inoshamwaridzana - inobhadharwa nekoroji yekuunganidza vadzidzi vatsva. Saka chikamu chechinangwa pane imwe yekoroji kushanyira ndekuwana vadzidzi vanogara vachida kukurukura nezvezvakaitika kwavari. Munguva yegore rechikoro, unovawana mumubatanidzwa wevadzidzi, dorms, dzimba dzekudzidzisa, quad uye kwose kwose. Munguva yezhizha? Ona chinhu # 1.
College tours hazvizorori kana kunakidza. Kushanyiro yakakwana yekoroji inhambo inotyisa, yakawanda-awa, ine purogiramu yakaoma uye runyora rwemibvunzo inokosha kuti uwane. Nokudaro kubatanidza zororo remhuri yako nerwendo rwekufambisa kwekoroji ndeyechokwadi moto nzira yekuputsa chero pfungwa yekuzorora. Iwe uchada hove kubva muzororo rako.
Vana vaduku vakoma vachakuvengai. Hazvina kunaka kune chero mukoma kana mukomana muduku kudarika sophomore kana gore junior rechikoro chesekondari. Vachakurumidzira kushanyira marwendo asingagumi uye kubvumira (kwavari, chero zvakadaro) vachitaura. Uye kana iwe wakanga uchitarisira kuti zvive zviviri, havangarangariri zvinyorwa zveyi chikamu kana yava nguva yokuti vashandise, saka iwe unofanira kudzoka zvakadaro. Zviri nani kuti uende navo pamwe nemumwe wako kuti muonesee kana kupararira pamadziro epa motel, kana kuti kwete kuedza zvachose.
Zvikonzero Zvakanaka Zvokutumira kuNew College
Chii chinonzi Commuter Student?
New College of Florida Photo Tour
Philadelphia Area Colleges uye Makunivesheni
Boston Area Colleges neYunivhesiti
Loyola University Chicago Photo Tour
Makoroji uye Maunivhesiti muWashington, DC
University of Southern California Photo Tour
Zuva muChiratidzo cha Leo
Chicago Cubs All Time Kubva Lineup
Top Top Ten Things to Know About Franklin Pierce
1937 Ryder Cup: The First Road Win (kana Home Loss)
Ley Lines: Mashiripiti Simba rePasi
Dzidzisa Vana Vako Kuimba muGermany "Backe, backe Kuchen"
Kwatingawana Mahara Free Accounting Courses Online
Pamusoro '80s Nyimbo dzeThe Smithereens
Triple Point Definition uye Example (Chemistry)
Stink Bugs, Family Pentatomidae
Top 3 Shylock Quotes uye Hurukuro
Texas A & M International University Admissions
Vadzidzi veOlympic Yekare - Varipi Iye Zvino?
Nzira dzekudzimba dzimba dzeMusic Music Instruction
Israeri Isingatendi Here Kana Kuti Inyika?
Chikamu Chinyorwa Chevadzidzi veChirungu
Dwight Eisenhower akasarudzwa kuHome Golf Hall of Fame
Best New York Yankees Matsi Evose Nguva
Tora Mweya Wechokwadi uye Nhau Dzakasiyana
Maitiro Okushandisa L'on kana On muFrench
Free Delphi Component Sets
Queens University yeCharlotte Admissions